Momba anay - Zhangjiagang Icool pet technology Co., Ltd.
MANarahaba anao amin'ny ICOOL
Zhangjiagang Icool pet technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2000, ary mamokatra hety mihevaheva faran'izay tsara sy hety fanapahana volo. Nahavita fandrosoana lehibe tamin'ny kalitaon'ny hety matihanina tamin'ny traikefa efa an-taonany maro izahay. Ny fizotry ny famokarana hety rehetra dia manara-maso ireo mpanao asa tanana za-draharaha mba hitazomana ny fahalavorariana, ny fitoviana ary ny fari-pahaizana avo lenta momba ny vokatra. Indrindra, ny maranitra ny lelany ary koa ny fanaraha-maso kalitao henjana dia azo antoka tanteraka.
Manondrana any Eropa, Amerika ary Azia atsimo atsinanana ny vokatray ary eken'ny mpampiasa sy eken'ny besinimaro izy io ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka.
Ny marika anay dia ICOOL (ny dikany sinoa dia "Love Cool") izay voasoratra anarana tany Japon, Singapore ary China (daratan).
Kalitao sy serivisy
"Serivisy laharam-pahamehana, kalitao voalohany" no kolontsainay, manana ekipa fanaraha-maso kalitao matihanina sy ekipa aorian'ny fivarotana izahay. Afaka manome serivisy OEM & ODM koa izahay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa ary mamokatra ny marikao manokana.
Manome lanja lehibe ny fifehezana kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faran'ny famokarana izahay. Ny vokatra rehetra dia hivory tanteraka ary hosedraina tsara alohan'ny hipetrahana.
24 ora amin'ny serivisy, manolotra fe-potoana fiantohana samihafa izahay ho an'ny vokatra samihafa. Mifandraisa aminay raha mila antsipiriany.
Staff mihoatra ny 150, isam-bolana manodidina ny hety 20000pcs manerantany. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia manolotra mavitrika karazana teknolojia famokarana mandroso, ary manatsara hatrany ny rafitra fitantanana kalitao, nanangana sampana fanaraha-maso kalitao ny orinasa, varotra sy varotra, famokarana, sampana fikarohana ary fampandrosoana ary fikambanana hafa. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa mpivarotra efa nahita fianarana sy za-draharaha 10, injeniera matihanina 10 ao amin'ny departemanta R&D ary 8 QC mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra ICOOL. Ny orinasanay dia isan-taona hampiofana mpiasa vaovao, ary hametraka ireo rakitra fampiofanana ho an'ny mpiasa, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany ny orinasako dia hanohy hanome fotoana fanofanana isan-karazany ho an'ny mpiasa, ary hanatsara hatrany ny kalitaon'ny mpiasa sy ny fahaiza-miasa, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra hanatsara hatrany.